Ny toetran'ny mpanohitra sy ny static PP Spunbond Nonwoven mpanamboatra sy orinasa | Henghua
Raha ampitahaina amin'ny lamba tenona, ny lamba tsy tenona amin'ny ankapobeny dia manana hamandoana ambany indray ary mora herinaratra mijanona mandritra ny famokarana sy ny fampiasana. Ny teboka miteraka herinaratra mijanona dia mety hiteraka fipoahana fitaovana mora mirehitra sasany. Mipoitra ny herinaratra mitohy sy ny herinaratra mijanona rehefa mitafy lamba nilona na volon'ondry amin'ny main-tany. Tsy mampidi-doza amin'ny vatan'olombelona izany. Na izany aza, eo amin'ny latabatra fandidiana, ny taratra elektrika dia mety hipoaka fanapoizinana ary manimba ny dokotera sy ny marary.
Raha ampitahaina amin'ny lamba tenona, ny lamba tsy tenona amin'ny ankapobeny dia manana ambany kokoa hamandoana indray ary mora amin'ny herinaratra mijanona mandritra ny famokarana sy ny fampiasana.
Ny teboka miteraka herinaratra mijanona dia mety hiteraka fipoahana fitaovana mora mirehitra sasany. Mipoitra ny herinaratra mitohy sy ny herinaratra mijanona rehefa mitafy lamba nilona na volon'ondry amin'ny main-tany. Tsy mampidi-doza amin'ny vatan'olombelona izany. Na izany aza, eo amin'ny latabatra fandidiana, ny taratra elektrika dia mety hipoaka fanapoizinana ary manimba ny dokotera sy ny marary.
Mba hamahana ity olana ity ary ahafahan'ny lamba tsy tenona ampiasaina be eny an-tsena, dia manome ny mpanjifa eran-tany antistatic tsy vita amin'ny lamba ny Henghua Nonwoven, mba hahafahan'ny lamba tsy tenona mahazo vokatra antistatika tsara, mampihena ny fahavoazana ateraky ny static herinaratra Ireo lamba ireo dia miaro ny fitaovana elektronika sy elektrika amin'ny afo sy ny fipoahana.
Ny lamba fanoherana ny static dia ampiasaina betsaka amin'ny fizotran'ny hafanana toy ny tobin-tsolika, ny fivarotana vy ary ny singa fanaovana Glass. Ny fitafiana dia ampiasain'ny olona ihany koa mba hijery manintona ary koa hiarovana ny vatana amin'ny toe-tany.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia famokarana tsy tenona mitohy, dia nanjary tsimbadika ho fitaovana vaovao mifandraika amin'ny tontolo iainana izy io, izay porofoin'ny hamandoana, afaka miaina, malefaka, maivana, tsy mora may, mora simba, tsy misy poizina ary tsy mahasosotra. , manankarena loko, ambany ny vidiny ary azo averina simba Ary ny toetra hafa, dia ampiasaina amin'ny fitaovam-pitsaboana, lamba ao an-trano, fitafiana, indostria, tafika ary sehatra hafa.
Ny lamba tsy tenona tsy miady amin'ny static dia azo ampiasaina amin'ny fiarovana ny fitaovana elektrostatika sensitive, fonosana amin'ny solosaina, fonosana floppy, fonosana singa elektronika, fikolokoloana sakafo ankapobeny Fampiharana tontolon'ny efitrano fitsaboana sy fanadiovana.
Raha misy liana aminao na te hahazo antsipiriany bebe kokoa dia tsindrio fotsiny ny fangatahana!
Ity manaraka ity dia ny fivarotana mafana spc: Lamba tsy mitongilana tsy miolakolaka / Loko: Manga maivana / lanja: 55gsm / sakan'ny: 1.6m / halava: 300m / horonan-taratasy / Fampiasana lehibe: akanjo fiarovana azo ovaina
Teo aloha: Anti-UV toetra PP Spunbond Nonwoven
Manaraka: Toetra anti-bakteria PP Spunbond Nonwoven
Pp lamba tsy tenona, Lamba tsy tenona, Lamba tsy misy tenona polypropylene Spunbond, Vidin'ny lamba lamba, Fitaovana tsy tenona, Lamba tsy vita tenona Polypropylene,